Apple inotangisa yechipiri yeruzhinji beta yeIOS 11 | IPhone nhau
Apple inotangisa yechipiri yeruzhinji beta yeIOS 11
Masikati ano Apple yakaburitsa yechipiri yeruzhinji beta yeiyo inotevera vhezheni yayo nharembozha inoshanda sisitimu, iOS 11, kuitira kuti vashandisi vakanyoresa muchirongwa ichi, uye kwete vanogadzira chete, vanogona kuyedza iyo nyowani isati yatanga kuburitswa zviri pamutemo mukudonha.
Iyi yechipiri yeruzhinji beta yeIOS 11 inosvika inenge vhiki mbiri mushure mekunge Apple yaburitsa vhezheni yapfuura, uye inoenderana neyechitatu yekutanga vhezheni yevagadziri yakaburitswa kutanga kwesvondo rino.
Kuti ndizorodze ndangariro zvishoma, iOS 11 inosvitsa imwe shanduko dhizaini mune inoshanda system, kunyanya zvine chekuita nekiyi skrini, uye yakanyatsogadziriswazve uye inogadziriswa yekuzivisa nzvimbo.
Iyo app Mirayiridzo ikozvino inobvumira munhu kumunhu kubhadhara uchishandisa Apple Pay, Notes yakagadziridzwa kusanganisira yekutsvaga kwekunyora uye sarudzo yekutora zvinyorwa, nepo izvozvi Apple Music anotibvumira share playlists neshamwari dzedu. Kunze kwezvo, ikozvino Siri inoita kunge yakangwara uye inopa yakawanda mutauro wechisikigo.
Ehe, isu hatigone kukanganwa nezve iyo app nyowani Archives, Rudzi rweKutsvaga yakashandisirwa kune iyo iPhone nePadad iyo inotibvumidza isu kuti tigadzirise ese edu emuno mafaera uye ayo akachengetwa muICloud uye nemamwe gore masevhisi (DropBox, Bhokisi, Dhiraivha, OneDrive). Kune zvakare Dock nyowani paPad, Sarudzo nyowani yekushandisa (App Switcher), sarudzo ku dhonza uye udonhedze mafaira pakati pezvishandiso izvo zvinonatsiridza inovandudza iyo multitask...
Uyewo iyo App Store yakagadzirwazve zvizere, uye muIOS 11, mapikicha nemavhidhiyo zvinotora nzvimbo shoma, Meseji inogona kuchengetwa muICloud uye iripo zvitsva uye zvinonakidza sarudzo kuti unyatsogadzirisa manejimendi kuchengetedza pane edu zvishandiso.
Iyo yechitatu beta yeIOS 11 yevagadziri yakaunza imwe nhau sevatsva vepaTV, nzvimbo nyowani dzeFiles app, shanduko kuApp Switcher yePad, uye nezvimwe, saka vanofanirwawo kuoneka mune ino yeruzhinji beta 2.
Kana iwe wakanyoreswa muchirongwa cheApple yeruzhinji beta, tarisa Zvirongwa → General → Software Gadziridza, ipapo iOS 2 Veruzhinji Beta 11 yakamirira iwe. Kana usati wanyoresa, unogona kuzviita pano, uye iwe zvakare uchave nekuwana kune yeruzhinji betas ye macOS uye tvOS
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inotangisa yechipiri yeruzhinji beta yeIOS 11
Batsira! Iwe unokurudzira kurodha iyi yeruzhinji beta pane yangu ipad pro? Iyo haina kukundikana kwakawanda kuti iite isingabatsiri?
Mubvunzo! Ndine matambudziko nemapikicha akatorwa neflash, anobuda akasviba zvakanyanya (zvirinani kutora pasina kupenya kunyangwe munzvimbo dzine rima). Sezvineiwo idambudziko rekubatana kwenguva pakati pekamera uye iyo flash, nekuti kana iwe ukabatidza mwenje asi wotora zvishoma gare gare (kana iwo mwenje wakadzimwa zvachose) ..
Sezvinei, dambudziko iri rinogona kugadziriswa neye nyowani IOS yekuvandudza kana haina chekuita nazvo?
iyi beta inoita kuti iphone yangu 6 iwedzere kunonoka uye kupisa zvakanyanya. Ndinovimba kuti iyo yekupedzisira vhezheni haina matambudziko
Podcast 8x40: Chisarai Mwaka 8
Akawana hunyanzvi hwePambaPod mushure meiyo nyowani Apple patent